Shiinaha Aluminium Qaybo warshad iyo soosaarayaal | Lead
Haddii aad leedahay qaybo aluminium ah ayaa loo baahan yahay in la farsameeyo, waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu kartida badan ee la awoodi karo, waxaanan ku qaban karnaa shaqada si sax ah.
Maxay yihiin faa'iidooyinka aluminium, iyo aluminium aluminiumku caan ku yahay?
Sababtoo ah Aluminiumku wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan oo heer sare ah, sidaa darteed wuxuu leeyahay adeegyo aad u ballaaran.
1.Cufnaanta Aluminiumku waa mid aad u yar, oo keliya 2.7 g / cm, in kasta oo ay jilicsan tahay, laakiin waxaa laga samayn karaa aluminium kala duwan, sida aluminium adag, aluminium aad u adag, aluminium miridh ah, aluminium la tuuray iwm. Kuwani aluminium aluminium ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa diyaaradaha, gawaarida, tareenka, dhismaha maraakiibta iyo warshadaha kale ee wax soo saarka. Intaa waxaa dheer, gantaalaha koonka, gantaalada hawada, dayax gacmeedyada sidoo kale waxay isticmaalaan waxyaabo badan oo aluminium iyo aluminium ah.
2.Aluminium waa hagaha wanaagsan ee kuleylka, kuleylka kuleylkiisa wuxuu 3 jeer ka weyn yahay birta, waxaa loo isticmaali karaa sameynta kala badalayaal kuleyl kala duwan, kuleylka kuleylka iyo maacuunta wax lagu karsado
3.Aluminiumku wuxuu leeyahay marin kafiican, 100 in ~ 150 ℃ waxaa laga dhigi karaa aluminium bireed ka khafiifsan 0.01mm. Foornadan aluminium ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha sigaarka, nacnaca, iwm, sidoo kale waxaa laga samayn karaa silig aluminium ah, xarig aluminium ah, iyo noocyada mny ee alaabada aluminium.
Dusha sare ee aluminium wuxuu leeyahay filim cufan oo ilaaliya oksaydh, kaas oo aan u nuglayn daxalka. Markaa waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo garsoorayaasha kiimikada, aaladaha caafimaadka, unugyada qaboojiyaha, dhirta sifaynta saliidda, dhuumaha saliidda iyo gaaska.
Qaar ka mid ah aaladaha aluminium ee ugu caansan ayaa raaca:
Waa maxay Codsiga Aluminiumku inta badan loo isticmaalo?
Qalabka Aluminium waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha gawaarida, qaybaha diyaaradaha, qaybaha qalabka caafimaadka, qeybaha elektarooniga ah, qeybaha alaabta guriga iyo codsiyada kale
Qaybaha Alaabta guriga
Qaybaha elektarooniga ah
Hore: Qaybaha Birta